Taliska Milatariga Soomaaliya ee Gobolka Gedo
Taliyaha ciidamada lugta ee XDS Gen. Maxamed Tahaliil Biixi ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha dowladda ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo iyagoo ka wada hadlay gulufka dagaal ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Jeneraal Biixi wuxuu sheegay in dadka reer Gedo ay aad ugu baaqayaan deganaanshaha degmooyinka gobolka, sidaa darteedna ciidamada looga baahan yahay inay si wada jir ah uga shaqeeyaan masuuliyadooda ah inay ka shaqeeyaan adkeynta amniga sida uu yiri.
Abaanduulaha ciidamada XDS ayaa si gaar ah ula kulmay saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo, waxaana lagu wadaa inuu tago degmooyin kale oo ka tirsan gobolka si uu u qiimeeyo, u dhageysto una xoojiyo dagaalka.
“Ujeedada booqashadeyda Gedo, si aan ula kulmo saraakiisha, askarta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ah ka shaqeynta xasiloonida, dardar galinta dagaalka ka dhanka ah cadowga, qiimeynta howlaha ay wadaan ciidamada iyo xoreynta nabad diidka ee kala qeybisay 8da. degmooyinka iyo baahiyaha dadka ” Ayuu yidhi Taliye Maxamed Tahliil Biixi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan ka soo daad gureysay magaalada Muqdisho, waxaana la geeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo, taasoo keentay qeylo dhaan aan dhamaaneyn oo ka timid madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo xitaa ku baaqay in meesha laga saaro guddiga doorashada ee 20/21.
Turkish households mourn their misplaced cherished ones